Ngaphezu kwe-P40, iHuawei iphinde yethule iWatch GT 2e, umsizi uCelia, iHuawei Video nokuningi | Izindaba zamagajethi
Isikhathi esingaphezu kwenyanga esedlule, uHuawei umemezele ukuthi ngoMashi 26 uzokwethula ngokusemthethweni eYurophu, ibanga elisha le-P40 uhla olwenziwe ngamamodeli ama-3 nokuthi sesivele siqhathanisa kuwo Lesi sihloko ngokufana kwabo ne Uhla lwe-S20 olwethulwe ngoFebhuwari odlule.
Kepha phakathi nalesi senzakalo, hhayi kuphela i- Huawei P40 ngezinhlobonhlobo zayo ezintathu, 4 uma sibala imodeli yeLite okufike emakethe emasontweni ambalwa edlule, njengoba inkampani yase-Asia nayo yethule i-smartwatch entsha Buka i-GT 2e, ngaphezu komsizi wakhe obhapathizwe njengoCelia kanye nezinye izinsizakalo.
1.1 Imininingwane ye-Huawei Watch GT 2e
2 Isevisi ye-Huawei VIP
3 IHuawei Video, insiza yokusakaza kaHuawei
4 UCelia, umsizi kaHuawei uqobo
Izwe le-smartwatch liyaqhubeka nokukhula unyaka nonyaka, futhi njengamanje seliwumthombo obalulekile wemali engenayo kubakhiqizi abaqhubeka nokubheja kulolu hlobo lwedivayisi nokuthi kuphi asitholanga noma yikuphi okuphethwe yi-Wear OS, Isistimu yokusebenza yeGoogle.
IGoogle ayikaze inikeze uthando olukhethekile ohlelweni lwayo lokusebenza lokugqokekayo ngaphezu kokunikeza uchungechunge lwemikhawulo abakhiqizi abangakwazanga ukuzungeza uma befuna ukuyisebenzisa. Lokhu kuphoqe abakhiqizi ukuthi basebenzise izinhlelo zabo zokusebenza, izinhlelo zokusebenza ezisebenza kakhulu futhi nokusetshenziswa kwebhethri okuphansi, enye yezinkinga ezinkulu zama-smartwatches.
Ukuzibophezela kukaHuawei emhlabeni wama-smartwatches kuyaqhubeka nokuqanjwa kwamagama ebikusebenzisa kuze kube manje futhi kubizwa ngeHuawei Watch GT 2e. I- Ukukhanga okuyinhloko kwalesi siginali ukuzimela, ukuzimela okuthi, ngokusho komenzi, kufinyelela kumaviki ama-2. Ngaphezu kwalokho, iyacwiliswa kuze kufike kumamitha ama-5, inikela ukwesekwa kwemisebenzi yezemidlalo engaphezu kwe-100 futhi isinikeza ngomklamo wezemidlalo.
Imininingwane ye-Huawei Watch GT 2e
Isikrini AMOLED angu-1.39-intshi
Umseshi I-Kirin A1
Isitoreji 4 GB wesitoreji
Conectividad IBluteooth 5.1 GPS Wi-Fi
Isistimu yokusebenza I-Lite OS
Izinzwa I-Accelerometer gyroscope inzwa yokushaya kwenhliziyo inzwa yokukhanya ezungezile i-barometer ne-magnetometer
Ukuphikiswa Icwiliswa kuze kufike kumamitha angama-50 - ama-ATM ama-5
Ukuhambisana I-iOS ne-Android
Ibhetri Izinsuku ze-14
Isisindo I-43 amagremu
Intengo I-199 euro
Icala lenziwe ngensimbi engagqwali futhi ibhande lihlanganisiwe kulo, ngakho-ke asikwazi ukukubeka esikhundleni namanye amamodeli sengathi asinikeza abanye abakhiqizi abanjengo Apple ne Samsung. Okuwukuphela kwendlela iWatch GT 2e evumelana ngayo nezinto esizithandayo ukuyithenga ngqo ngombala esiwuthandayo (omnyama, obomvu noluhlaza okotshani). Imichilo isibonisa idizayini efana kakhulu naleyo esingayithola kuhla lwe-Nike lwe-Apple Watch, enezimbobo kuyo yonke futhi basethulela ngehuku elinebhakede.
Uma sihlose ukusebenzisa iHuawei Watch GT 2e ukukala umsebenzi wethu wezemidlalo ongaphandle nge-GPS, ukuzimela kwehliswa kwaba ngamahora angama-30, ukuzimela ezinye izinhlobo ezingathanda ukukunikeza lapho zisebenzisa i-GPS edidiyelwe.
Iwashi ibona ngokuzenzakalela umsebenzi esiwenzayo, okungenani imisebenzi ejwayelekile, umsebenzi ofanele kulabo abakhohlwa njalo ukuthi i-smartwatch isetshenziselwa okungaphezu kokubona isikhathi nezaziso ze-WhatsApp. Ngaphandle kwenzwa yokushaya kwenhliziyo, ibuye ifake inzwa ebhekele ukukala izinga le-oxygen egazini.
IHuawei Watch GT 2e, izongena emakethe ngama-euro ayi-179, futhi yize lungekho usuku oluthile lokukhishwa okwamanje, kungenzeka ukuthi luzokwenza kanjalo nge iHuawei P40 entsha ekuqaleni kuka-Ephreli 2020.
Isevisi ye-Huawei VIP
I-Google isinikeza u-15 GB wesikhala sesitoreji samahhala futhi esingenamkhawulo efwini lezithombe zethu nezithombe ngezithombe ze-Google. Ngokungahlanganisi izinsizakalo zeGoogle, iHuawei yethule eyayo insiza yakho yokugcina amafu ibizwa ngeHuawei VIP Service, insiza esivumela nge-ID yethu yeHuawei, ukuthi sibe nesipele ngezithombe zethu, amavidiyo, izinhlelo zokusebenza, izilungiselelo ze-smartphone ...
Kumahhala, sinakho I-5GB yesitoreji samahhala kanye nenye i-50 GB mahhala ezinyangeni eziyi-12 ezizayo.
IHuawei Video, insiza yokusakaza kaHuawei
Njengoba singenazo izinsizakalo zeGoogle, yize zingafakwa kalula uma sisesha i-inthanethi, inkampani yase-Asia isinikeza eyayo insiza yokusakaza ividiyo ebizwa ngeHuawei Video, ipulatifomu engama-euro angu-4,99 ngenyanga, isinikeza ukufinyelela kukho kokubili uchungechunge namafilimu, womabili amazwe, iYurophu neSpanishi.
Kepha ngaphezu kwalokho, iphinde isinikeze amafilimu okuqala, amafilimu esingakwazi ukuqasha amahora angama-48 ukujabulela kwi-smartphone noma ithebhulethi yethu, futhi ngokuzayo, nakwamanye amadivayisi. Singavivinya iHuawei Video mahhala izinyanga ezimbili. Ukuze sikwazi ukufinyelela kule nsizakalo, sidinga idivayisi ye-Huawei / Honor ene-EMUI 5.x noma ngaphezulu, nokuthi i-ID yethu ibhaliswe eSpain noma e-Italy.
UCelia, umsizi kaHuawei uqobo
Umsizi omusha ofika emakethe, ukwenze kusuka esandleni seHuawei futhi ukwenzela ukuvala ukuntuleka kwezinsizakalo zeGoogle. Igama lakhe, uCelia, unezwi lowesifazane futhi isinikeza ukusebenza okufanayo esingakuthola njengamanje kwabanye abasizi abanjengoSiri, Alexa, Bixby noma Umsizi weGoogle.
Ayigcini ngokusivumela ukuthi sisethe ama-alamu, sihlole i-ajenda noma sithumele imilayezo, kepha futhi isivumela ukuthi sikwazi ukufinyelela kumculo wethu esiwuthandayo, ukuphatha ukudlala kwawo, ukwenza kusebenze futhi kungasebenzi izindlela ku-smartphone yethu, ukudlala uchungechunge lwamahlaya, ukuhumusha imenyu yokudlela, ukuthatha isithombe ozishuthe sona ...
Kubo bonke labo ababhekene nokuphepha kwakho nobumfihlo bakho, iHuawei ikubheka lokhu futhi ithi lokho ubunikazi bezwi bugcinwa kuphela kudivayisi, njengama-iPhones, futhi ayisoze yathunyelwa efwini. Ngaphezu kwalokho, ihambisana ne-European GPDR.
UCelia ufika ehambisana neHuawei P40, itholakala ngeSpanishi, isiNgisi nesiFulentshi futhi iyatholakala kubasebenzisi baseSpain, eChile, eMexico, eColombia, e-United Kingdom naseFrance.
Ngokuphathelene nezwi lowesifazane, akunakwenzeka ukuthi ngaphakathi kwezinketho ezinikezwa umsizi, sizoba nenketho yoku shintsha izwi kowesilisa, ngaphezu kwanoma yini ngoba uCelia igama lesifazane (noma uma lalibizwa ngokuthi iManolo) i-Alexa, iSiri noma iBixby ngamagama angathathi hlangothi, ngakho-ke singabeka ubulili obufunayo ngokusungula izwi lowesilisa noma lowesifazane.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Amadivayisi agqokekayo » Ngaphezu kwe-P40, uHuawei ubuye wethula iWatch GT 2e, umsizi uCelia, iHuawei Video nokunye.
Amasayithi amahle kakhulu wokulanda izincwadi zamahhala